फातिमाको कारण आमिर र किरणको सम्बन्ध टुटेको चर्चा ? - Nepal Daily
फातिमाको कारण आमिर र किरणको सम्बन्ध टुटेको चर्चा ?
सोमबार, २१ असार २०७८, १२ : ०० मा प्रकाशित
बलिउड अभिनेता आमिर खानको दोस्रो वैवाहिक सम्बन्ध पनि विच्छेद भयो। आमिर र उनकी श्रीमती किरण रावले शनिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिए। उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदको खबर आएसँगै अभिनेत्री फातिमा सना शेख सोसल मिडियाको ट्रेन्डिङमा छाएकी छिन्।
आमिर-किरणको सम्बन्ध टुट्नुमा फातिमाको भूमिका रहेको आरोप छाएको छ। उनी आमिरसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा छ। फिल्म दंगलमा आमिर र फातिमा बुवा छोरीको भुमिकामा देखिएका थिए। यसका साथै फिल्म ठग्स अफ हिन्दुस्तानमा समेत उनीहरूले एकसाथ काम गरेका थिए। त्यसैबेला दुबैका फोटोहरू समेत भाइरल भएका थिए। सन् २०१६ देखि २०१९ को बिचमा उनीहरूबिच प्रेमसम्बन्ध रहेको बताइएको छ।
फातिमाले भने आफूहरूबिच अफेयर नरहेको दावी गरेकी थिइन्। एक अन्तर्वाताका क्रममा उनले आमिर खानलाई एक मार्गदर्शक र गुरु मान्ने समेत बताएकी थिइन्। तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने आमिर र किरणको सम्बन्ध बिग्रिनुमा फातिमालाई जोडिरहेका छन्।
यस्तो नोट छाडेर आत्महत्या गरिन् जेनीले
बल्छी धुर्बेकाे चर्चित टेलिसिरियल ‘जुठे’ फेरि प्रसारण हुँदै
म आफूलाई बदल्न सक्दिनँ : विद्या बालन
भीष्मराजको नयाँ गीत ‘म मरे भने त...’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
अमेरिकन आइडलको टप ७ बाटै दिवेश बाहिरिए
‘दोर्जे डन ब्याक अगेन’को वैशाख ४ गते राष्ट्रिय नाच घरमा विशेष प्रदर्शन गरिने